ဆယ့်လေးသိန်းအလွန်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆယ့်လေးသိန်းအလွန်….
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Sep 20, 2012 in Creative Writing, Think Different | 29 comments
ကလင်…. ကလင်…. ကလင်…. စားပွဲပေါ်မှဖုန်းလေးမြည်လာသည်…
ထုံးစံအတိုင်းဖြစ်နေကြ ကွန်ပျူတာပြသနာများအတွက် မေးမြန်းမှုပင်ဟု တွက်ထင်ပြီး ဖုန်းအားကောက်ကိုင်လိုက်သည်…
“ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့စာရွက်တွေ HR အခန်းမှာလာပြီးယူလို့ရပြီနော်… ”
“ အော်… အင်း လာခဲ့မယ်… ခဏလေးပါ… ”
လုပ်လက်စလေးကို လက်စသပ်… အောက်ထပ်ကိုပြေးဆင်းသွားပြီး… ၀င်ငွေခွန်ပြေစာယူရန် HR အခန်းထဲသို့ တံခါးလေးခေါက်ပြီးဝင်သွားလိုက်သည်…
HR Officer အနားတွင် ရုံးမှအရာရှိတစ်ယောက် ပြေစာထုတ်ယူရင်းစကားစမြည်ပြောနေသည်… သူ့ကိစ္စပြီးပါစေလို့
ခဏစောင့်ရင်း… ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ လက်မှတ်လေးထိုးနေတုန်း… သူက စကားစ၏…
“ ဘယ်လိုတုန်းဗျ… ကိုအိုင်တီရ… ကျွန်တော်အခုပဲပြောနေတာဗျ…”
“ ဟုတ်… ဘာကိုလဲအစ်ကို…”
“ ဒီလိုဗျာ… အစိုးရက တစ်နှစ်ကို တစ်ဆယ့်လေးသိန်းနဲ့အထက်ဝင်တဲ့လူတွေကို အခွန်ဆောင်ခိုင်းတယ်…”
“ အင်း…” ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်ပြီး ထောက်ခံလိုက်သည်…
“ တစ်ဆယ့်လေးသိန်းနဲ့အောက်ဝင်ငွေရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ သူတို့ဝင်ငွေက သူတို့အသုံးစရိတ်နဲ့ လောက်ငရုံပဲရှိတာကြောင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတယ်… အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ကလဲ ၁၄သိန်းနဲ့အထက်ပိုတဲ့ဝင်ငွေအပေါ် မှာပဲ အခွန်ဆောင်ခွင့်ရှိသင့်တယ်လို့ ပြောနေတာပါဗျာ… ဟဲ..ဟဲ..”
ပြီးတော့ အပေါ်ထပ်ကို စာရွက်လေးကိုင်ပြန်တက်လာပြီး… အလုပ်စားပွဲမှာထိုင်ရင်းအထပ်ထပ်တွေးမိတယ်…
ဘာအတွက် ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်ရတာလဲ… တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာနေတဲ့ လူသားတစ်ဦးအတွက်… ထိုတိုင်းပြည်ရဲ့မြေပေါ်မှာရှင်သန်ရင်းရှာဖွေရသမျှရဲ့ အချို့တစ်ဝက်ကို တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အခွန်ဆောင်ရတာသဘာဝကျပါတယ်…
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အခွန်ဘာလို့မဆောင်ချင်သလဲ… တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့သောသူများက ရသမျှငွေအားလုံး ကျောက်ခဲအရည်ညှစ် သူတို့မိသားစု အိတ်ထဲကို ထည့်…
သူတို့တွေချည်း နေ့ချင်းညချင်းကြီးပွားသွားတော့ ပြည်သူလူထုကလဲအစိုးရကို ကိုယ့်အကြောင်း မရှိဘဲ ငွေဆိုလို့ ချူးတစ်ပြားမှမပေးချင်တာကနေ… ပြသနာကစတာပဲ…
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လူတန်းစေ့နေချင်ကြတယ်… ရေပုံမှန်လာစေချင်တယ်…
မီးပုံမှန်လာတာကိုကြိုက်တယ်.. Bus ကားတွေချောင်စေချင်တယ်…
အဲဒါဆိုတော့ ပြန်တွေးလိုက်ရင် ဒီမိုကရေစီရတာနဲ့ အဲဒီဟာတွေအကုန်လုံးက နတ်ရေကန်ထဲကျသလို… ဖြစ်လာမှာလား…
ကျွန်တော်တို့သေချာပြန်စဉ်းစားရင်… ဒီနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက် လည်ပတ်ငွေလိုတယ်… အဲဒီလိုပဲ… အစိုးရဘက်ကလဲ ယုံကြည်မှုကို သေသေချာချာပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုလာတယ်…
အခုအချိန်မှ သမ္မတကြီးဆို ချစ်ပြနေကြသူတွေ… ထောက်ခံနေကြသူတွေ… အခွန်ဆောင်ကြလားလို့မေးရင်… တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြပါတယ်… ၀င်ငွေနည်းပါးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှိသမျှသယံဇာတတွေကို ကုန်ကြမ်းဈေးနဲု့ထုတ်ရောင်းရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ…
အဲဒီတော့ လိုအပ်သလောက် ပြန်ရတဲ့ဝင်ငွေမရှိဘူး… အဲဒီတော့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို မလုပ်နိုင်ဘူး…
အဲဒီကြားထဲရတဲ့မလောက်မင၀င်ငွေကို အလွဲသုံးစားအနည်းနဲ့ အများလုပ်ကြသေးတော့ ဒီပြာပုံထဲက မထွက်နိုင်ဖြစ်ရပြန်ရော…
အဲဒီအနေအထားမှာ ပြုပြင်ရမယ့်သူတွေက ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလဲ… ပေးဆောင်ရမယ့်အခွန်အားလုံးကို မပျက်မကွက်ပေးဆောင်စေချင်ပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကလဲ ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ ချွေးနည်းစာများ၊ ယုံကြည်မှု၊ မျှော်လင့်မှုကို တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ထားကိုယ်စီမထားဘဲ နိုင်ငံတိုးတက်မှု အတွက် ရှေ့တန်းတင်စေလိုပါကြောင်း….
ဆယ့်လေးသိန်း ကျော်ရင် အခွန်ဆောင် ဆိုဒေါ့..
ဆယ့်လေးသိန်းအောက်ပဲ ၀င်တဲ့လူတွေကိုကော အဆိုးရက ထောက်ပံ့ဖို့အဆီအဆင် မချိဘူးလားဟင်
ဆယ့်လေးသိန်းအောက်ပဲ ဝင်ဝင် ၊ ကျော်ဝင်ဝင်
အားကောင်းမောင်းသန်ယောက်ျား ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ညီရင် ၊ ထောက်ပံ့ပေးမယ့်လူတွေ ကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲမှာ အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် လို့ ရတယ် ဆိုလားပဲ
အားကောင်းမောင်းသန် မဖြစ်လည်းရတယ် ထင်တယ်…
ဘာလို့ဆိုတော့ နှင်းနှင်းအစ်ကိုက model boy …..း) …
ကိုပေ နဲ့နာမည်တူတယ်..ပေရှိန်..ပိန်ရှည်(၆ပေ)…ရုပ်ကလည်း ချောတယ်..
တစ်ရက် အဲ့ဈေးနားက ဆိုင်တစ်ခုမှာ အေးအေးလူလူထိုင်နေတုန်း အမြင့်ကား
ကြီးတစ်စီးနဲ့သားသားနာနား မမ၃ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ sex act အလို့ငှာ
တစ်ယောက်က ကားတံခါးနားဆင်းပြီး မရဲတရဲနဲ့ကြိတ်ပြီး အသံအုပ်အုပ်နဲ့
နောက်ထပ် ထပ်ခေါ်လည်းအစ်ကိုက မလှုပ်တော့(အဲ့တုန်းကတော့ အထာတွေ
မသိဘူးတဲ့)ခေါ်နေတဲ့ sex-starved မမက စိတ်တိုလာပြီး ပွစိပွစိနဲ့ရွတ်ပြီး
ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီး ၃ယောက်သား မောင်းထွက်သွားကြပါတယ်တဲ့…ဟယ်..
…..male sex worker..ဆိုရင် သွားတိုက်တံ သို့ နှင်းဆီပွင့် ဆောင်တယ်..
ဒါမှမဟုတ်ရင် လက်ဘက်ရည်ပန်ကန်းပြားကို ပန်းကန်လုံးပေါ်မှောက်တင်
ဖက်တီးကက်ရေ…မနက်မှ HR နဲ့ ပြန်ချက်လုပ်ပီး မန့်မယ်ဗျာ…
ကြီးမိုက်လည်းအမှန်အကန် ဆောင်နေတဲ့ အခွန်ထမ်းပြည်သူတစ်ယောက်ပါ..
နိုင်ငံတကာမှာတော့ မိမိဝင်ငွေအပေါ် တရားဝင်ပေးဆောင်သင့်တဲ့အခွန်ကို
မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်နေသူတွေဟာ ရင်ကော့ပြီး တိုင်းပြည်ချစ်သူအစစ်လို့ပြောနေ
ဂုဏ်ယူနေကြတာပါ..မြန်မာပြည်မှာလည်း အဲဒီလိုနိုင်ငံကြီးသားစိတ် မွေးတတ်အောင်
လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ဗျ..ကျနော် အခွန်အကြောင်း ကိုစွယ်တော်ရွက်တင်တဲ့ဆီမီနာမှာ
ဆွေးနွေးဖူးပါတယ်…သင့်တင့်မျှတတဲ့ ၀င်ငွေအမောင့်သတ်မှတ်ပီး ဆောင်ထိုက်သူကိုအမှန်အကန်
ဒိမတိုင်ခင်(နောက်ဆုံးဝင်ငွေခွန်ဥပဒေသစ်မထွက်လာခင်) ကတော့ ကျနော့စက်ရုံက အထွေထွေ
အင်း ဘယ်လိုပြောရပါမလဲ ဖတ်လိုက်တော့တစ်ခုတော့သေချာတာတွေ့တယ် တစ်ဆယ့်လေးသိန်းနဲ့အောက်ဝင်ငွေရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ သူတို့ဝင်ငွေက သူတို့အသုံးစရိတ်နဲ့ လောက်ငှရုံပဲရှိတာကြောင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့၊ လ အနေနဲ့တွက်ကြည့်ရင် တစ်လကို ကျပ် 116666 ဟာ အသုံးစရိတ်လောက်ငှရုံလို့ အစိုးရက ဆိုတာပေါ့နော်။
ဒါဆို အစိုးရအနိမ့်ဆုံးဝန်ထမ်းရဲ့လစာဟာ အနည်းဆုံး ကျပ် 116666 ပေးထားတာ မဟုတ်ရင် မလောက်မငှပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်နေတာလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ငါးသောင်းကျော်ကို တရားမ၀င်ရှာခိုင်းတာလား။
မီတာတွေ ခိုးသုံးတယ်ဆိုလို့ ..
နယ်တွေမှာ လျှပ်စစ်ကို ခိုး သုံးကြတယ် ဓါတ်တိုင်က တိုက်ရိုက်ချိတ်တယ်
တစ်လကိုတော့ အီပီစီကို ၃၀၀၀ ပေးကြရပါတယ်။
တစ်နှစ် ဆယ့်လေးသိန်းဝင်ငွေရှိသူတွေတောင် တစ်လတစ်သိန်းကျော်ကျော်လောက်ဝင်ငွေလောက်ပဲရှိတာ
သူတို့ကော မိသားစုစားစရိတ် လောက်ငှမှုရှိကြပါ့မလား..????????
ကိုဝတုတ်ရယ် ကျမတို့ ဘာရေ ဘာမီးမှ ခိုးမသုံးရပါဘူးရှင်။
ရေခွန် မီတာခွန် မြေခွန် စည်ပင်ခွန် လုပ်ငန်းခွန် ကုန်သွယ်ခွန် အမြတ်ခွန် လူမှုဖူလုံရေးက လစဉ်လာကောက်တာလည်း ရှိသေးတယ် ဆိုတာတွေသာ မက အခါအားလျော်စွာ မီတာခ မှန်မှန်ဆောင်နေပါရဲ့ နေ့စဉ် ပဏာဆက်သလို မှန်မှန်ဆက်နေရပါသေးတယ်။ ပြောင်းတယ်သာ ပြောတာ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းဘ၀ပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
ကိုယ့်အိမ်ရှေ့က လမ်းကို ကိုယ့်လမ်းထဲက လူတွေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ခင်းတာ စည်ပင်ကို လမ်းခင်းကြေးရဲ့တ၀က်ပေးစားပြီး ( သိန်း ၃၅၀ နီးပါး ) ပေးပြီးမှ ခင်းခဲ့ရတာပါ။
အထောက်ထား အစုံလင်နဲ့ကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်နော်။ သူတို့လိုချင်သလောက်မရလို့ မြောင်းပါတူးပြီး ရေမလျှံအောင် လုပ်ချင်တာကို ခွင့်ပြုမိန့်မပေးလို့ မလုပ်ခဲ့ရပဲ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လမ်းရေလျှံတာကို ကြည့်နေခဲ့ရတာပါ။ ပြီးခဲ့တာတွေ မြေလှန်လို့ ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး ထင်လို့ ပါးစပ်ပိတ်ထားတာပါ။ အလကားနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြသာနာ မရှာချင်လို့ပါ။
ပေးဆောင်ခဲ့တဲ့ အခွန်စာရွက်တွေလည်း တထောကြီး ပုံမှန်သိမ်းထားပါတယ်။ ဘာတွေများပြန်လုပ်ပေးခဲ့ ပြန်ရခဲ့လို့လဲ ရှင်။
ဆယ့်လေးသိန်းကျော်ကို အခွန်ဆောင်ခိုင်းတာ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ တသိန်းကျော်ဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုဘယ့်နှယ့်လောက်မလဲ။ ဒေါသထွက်လာပြီ ပြောရင်း ။ ကြည့်ကျပ်လည်း လုပ်ကြပါ အရပ်ကတို့ရယ်။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က လူတွေရဲ့ အခြေနေကို သေချာရေ သိရဲ့လား မသိ။ ခရိုနီလို အကြီးစားများကို ကျ မျက်စိမှိတ်ပြီး မရှိတဲ့သူကို ဂုတ်သွေးစုတ်ချင်နေတယ် ။ အဲ့လို မတော်မတည့် ဥပဒေလာရင် ကိုယ်တိုင် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြမယ်
အချိုးနဲ့ စနစ်တကျ.. ဆောင်ကြပေါ့..။
သိန်း၁၄၀၀၀င်သူကလည်း.. သိန်း၁၄၀၀အလျှောက်..။ ၁၃သိန်းပဲဝင်သူကလည်း.. ၁၃သိန်းအလျှောက်ပေါ့..။ ငွေမလောက်ငှသူတွေက.. အခွန်ဆောင်ပြီးမှ.. ကလေးရှိလို့.. ခွေးရှိလို့.. Tax return ပြန်ထုတ်ပေါ့…။
အခွန်ဆောင်မှ.. အစိုးရဆိုတာ.. လူထုရဲ့အခိုင်းအစေဖြစ်မှန်း သိသာတာပါ..။
အဲဒီမှာမှ.. ဒီမိုကရေစီက.. စလုံးရေစတာ….။
တသိန်းဝင်ငွေကို ၁% နဲ့ ၁၀၀၀ နှုန်းဆိုရင်တော့ ပြောစရာမရှိပေမဲ့ ၁၀% ဆိုတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။
နောက်ပြီး အဲ့လို ကလေး ရှိလို့ ခွေးရှိလို့ tax return ပြန်ထုတ်လို့ ရတယ်လား ။ ဒါမျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း မဆိုးရှာ။
ါကြည့်ရတာ နောက်ဆို ဥပဒေအကြောင်း အခွန်အကြောင်း ဘက်စုံ ထောင့်စုံကနေ လေ့လာထားရတော့မယ် ထင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေခွန်မှာလဲ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၄သိန်းထက်ပိုသောသူများက အခွန်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်…
သို့ပေမယ့် အိမ်ထောင်ရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်က အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မင်ဆိုရင်… စုစုပေါင်းဆောင်ရမယ့်အခွန်ထဲက နှစ်သိန်း၊ သားသမီးရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်စသည်ဖြင့် Tax Return ပြန်ထုတ် ပေးပါသေးတယ်…
နောက်တစ်ခုကလေ… ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတွေက မီးမလာရင်… ရေမလာရင် လမ်းပေါ်ထွက်အော်
ကြတယ်ဗျ… သို့ပေသည့် မီတာခမှန်မှန်မလာရင်… ရေမီတာလာမဖတ်ရင်… တစ်ယောက်မှမအော်ကြတာ တွေ့ရတယ်…
အဲဒီမှာမှ.. ဒီမိုကရေစီက.. စလုံးရေစတာ….
ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်သင့်တာ အစိုးရရဲ့လည်ပတ်မှုယန္တရားကို ပိုမိုချောမွေ့ဖို့၊ ပိုမိုတိကျဖို့ကို တွန်းအားပေးရမှာပါ…
အဲဒီတော့ အစိုးရကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေခွန်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အခိုင်းအစေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြရအောင်ဗျာ…
ခလေး တစ်ယောက်၊ ခွေး ၆ ကောင်၊ မိန်းမ က အလုပ်မရှိ .. ကျွန်တော့ အနေအထားဆို .. အခွန် ထမ်းရတာနည်း နိုင်မယ် ထင်ရဲ့ …
မမယ်ပုခ်ျရေ အခွန်ပေးဆောင်ဖို့က ၁၀% မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်လ လစာကျပ် ၁၃၀၀၀၀ ရတဲ့ အရာရှိတစ်ယောက်က တစ်လ၀င်ငွေခွန်ပျှမ်းမျှ ကျပ် ၁၈၇၀ လောက်ဘဲမို့ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁.၅ နီးပါးပါဘဲ ။ အဲဒီမှာ အိမ်ထောင်ရှိပြီး သားသမီးမရှိရင် တစ်လ၀င်ငွေခွန်ပျှမ်းမျှ ကျပ် ၁၁၆၃ လောက်မို့ ရာခိုင်နှုန်း ၀.၉ လောက်ဖြစ်ပြန်ရော အိမ်ထောင်လည်းရှိ၊ သားသမီးလည်းရှိဆိုရင် တစ်လ၀င်ငွေခွန်ပျှမ်းမျှ ကျပ် ၈၃၀ ဆိုတော့ ၀.၆ ရာခိုင်းနှုန်းဘဲရှိတော့မှာ ဒါတောင်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွက်ထားတာနော် ၂ ယောက် ၃ ယောက်ဆိုရင် ထပ်လျော့အုံးမှာပါ။ သိတာလေးမျှဝေတာပါ။
အခွန်ထမ်း ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ အခွန်ဆောင်ရတာကို ဂုဏ်ယူတတ်အောင် ပြုလုပ်ပေးမဲ့ အစိုးရရယ် လိုလိုလားလားအခွန်ဆောင်ချင်တဲ့ ပြည်သူပြည်သားတယောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် ကိုဝတုတ်ရယ်။
ဟုတ်ပါ့ ..မမ pooch ရယ်..
ပြုံးရဲ့အစ်မ ဂျာမနီသွားတော့ အထူးဆန်းဆုံးကိစ္စကြုံခဲ့ရတယ်။ သူ့အိမ်ရှင်က အခွန်ဆောင်ရမယ့် ဖောင်တွေကို အချိန်ယူပြီး ဖြည့်တယ်။ အခွန်ဆောင်ရတာကို အင်မတန် လိုလိုချင်ချင်နဲ့ကို ကိုယ့်ဖက်က မလစ်လပ်ရအောင် မကျန်ရအောင် ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်အောင် စေတနာအပြည့်နဲ့ ဖြည့်သတဲ့လေ။ အံ့ကိုသြရော။ ပြုံးတို့အတွက်ကတော့ ထူးခြားဆန်းကြယ်ဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။
အခွန်အကြောင်း ကိုမကြားချင်ဘူး…………. လစာလေးထုတ် ဆောင်လိုက်အခွန်…..
လစာထုတ်လို. ငတ်တလှည့်ပျက်တလှည့်နေခဲ့ရတဲ့ ပါးစပ်လေး စမတ်ကျကျလေး စားသောက် ပြီးတော့ ဆောင်လိုက်ရပြန်ပြီ စားသောက်ခွန် 10% အဟင့်……….
ဆောင်ကား ဆောင်၏ မကောင်းပေါ့…….. စိတ်နာဒယ်…… အခုဆို နေကြာစေ့၊မြေပဲပြုတ်၊လိမ္မော်သီး၊ငှက်ပျောသီး……. လုံးဝ မစားတော့ဘူး အခွံပါလို…… အဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးး :eee: :hee:
ကလေးများများမွေး tax return ပြန်ထုတ်ပြီး
ကလေးကြောင့် လျော့တာ မိန်းမကြောင့်လျော့တာနဲ့ 
ကလေးရှိလို့ကျွေးရမှာ မိန်းမရှိလို့ကျွေးရမှာနဲ့ …..
သူများတွေကို မြှောက်မပေးနဲ့ …………
စူပါနချရယ် ဇာတ်လမ်းတွဲတခုမှာ ကျုပ်က အခွန်ထမ်းပြည်သူတယောက်ပဲဆိုပြီး ဂုဏ်ယူပြောတာကြည့်ရတယ်။ ဒီမှာတော့အခွန်ဆိုရင်ရှောင်စရာရှားစရာလို့ယူဆနေကြတုန်းပဲ။
ဒီပို့စ်နဲ့မန့်တွေကို သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြရမယ် ဒါမှအမြင်ကျယ်အောင်..။
နိုင်ငံသားတိုင်း ကိုယ့်နိုင်ငံကို စည်ပင်ဝပြောစေချင်ရင် တာဝန်ကြေ အခွန်ဆောင် ပြည်သူဖြစ်အောင် လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ ဆရာ့၊ ဆရာကြီးတွေရဲ့ အရေးအသားတွေမှာဖတ်ဘူးတယ်။ ကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေကို နားလည်ပါတယ်၊ တနှစ်ကို ၁၄သိန်းအထက်ဝင်ငွေရှိသူတွေကို အခွန်ဆောင်ဖို့ ကြပ်မတ်နေသလို၊ တနှစ်ကို တန်းဖိုးဖြတ်လို့မရအောင် ၀င်ငွေတွေရှိနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလဲ company မှာ cash book နှစ်အုပ်မထားပဲ အကျိုးအမြတ်ကို မြင်သာထင်သာအောင်ပြပြီး အခွန်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ အခွန်ကောက်ရန် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လဲ အသေးစိတ်စစ်ဆေးအရေးယူသင့်သလို၊ company accountant တွေအနေနဲ့လဲ သဌေးအကြိုက် စာရင်းဇယားတွေကို ပြင်ဆင်မဆွဲသင့်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ တော်ပြီး ပြောရတာမောလာပြီ… ဘယ်တော့မှ ပျောက်မဲ့အရာတွေလဲမသိဘူး……….
အခွန်ရှောင်သူများကို အခွန်ဆောင်ခိုင်းပါ။ မဆောင်ရင် အောင်ကြူးပြောသလို ဖမ်းချုပ်ပလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် အခွန်ဆောင်တဲ့သူတွေပဲ ထောက်ပံ့ပေးပြီး အခွန်မဆောင်ရတဲ့ အောက်လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ပေးရင် ကောင်းမယ်နော်။
အဲဒါဆို Single တွေရော ယောက်ျား သို့ မိန်းမလည်းမရှိ ကလေးလည်းမရှိတော့ ကိုယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်ရော tax return ပြန်ထုတ်လို့မရနိုင်ဘူး
လားရှင့်….Single တွေရော မိဘ သို့ အဘိုး၊အဘွား ရှိလို့(လုပ်ကျွေး၊ပြုစုစောင့်
ရှောက်ရလို့..မိန်းမလည်း လုပ်ကျွေးရတာပဲလေ…း)…) ၀င်ငွေခွန်ကို အလားတူ
အတူတူ အိမ်ထောင်သည်က တစ်ပန်းသာနေသလိုပဲ….
အပျို/လူပျိုတွေနဲ့စာရင်.. အိမ်ထောင်သည်တွေက.. အခွန်ဆောင်တာသက်သာရပါတယ်..။
အလုပ်မလုပ်တဲ့.. မိဘကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားရင်.လည်း… အစိုးရက.. အခွန်သက်သာခွင့်ပေးရပါတယ်..။
အိမ်ထောင်သည်တွေထဲမှ.. ကလေးရှိရင်.. ထပ်သက်သာရပြန်ရော..။
အဲ..ကလေးများရင်.. မိဘက..ဘာအလုပ်မှတောင်လုပ်စရာမလို.. အစိုးရက ပြန်ပေးကျွေးရတာပါ..။
အဖမြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ထောင်ရာမှာ.. “မြန်မာ့လူဦးရေ”အဓိကပါလို့.. ကျုပ်လည်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်..။
The HAPPY Bill, House Resolution 3501, is the Humanity and Pets Partnered Through the Years Act. If would allow “qualified pet care expenses” fora“qualified pet” up to $3500ayear.
အခွန်အကြောင်းကို အားလုံးကြောင့် ခုမှ စုံစုံစေ့စေ့ သိလိုက်ရတယ်…
ခုလို ထပ်ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..သူကြီးရှင့်….
သူ့ကို ခုချက်ချင်း နားဝင်အောင်ပြောပြလိုက်ပါတော့မယ်…